in Entertainment, Lotaya
သင်သာ RS တစ်ခုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ကောင်လေးနှင့် သူငယ်ချင်းတွေအကြား စိတ်ရှုတ်ထွေးရတာတွေ ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတလေ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ ရွေးရမလား (သို့) သင့်ကောင်လေးပဲလားဆိုတာမျိုး အခက်တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးသတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်း အဆက်ဖြတ်လိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို သင့်relationship ကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချက်အလက်တွေကို စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
၁။ ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာပါ
ဆိုလိုတာက ဘယ်သူ့ဘက်က မှားနေလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပထမဆုံးရှာပါ။ သင်သိထားဖို့က ပြဿနာတွေကို အပေါ်ယံပဲမကြည့်ဘဲ အခြေခံကျကျရှာပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာ အကြောင်းအရာမယ်မယ်ရရမရှိဘဲ မုန်းနေတယ်(သို့) ကြည့်မရဘူးဆိုတာက ယုတ္တိမရှိလွန်းတဲ့ ကိစ္စပါ။ သင်မသိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တစ်ချို့ ဝှက်ထားနိုင်သလို (သို့) အတိတ်က ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာက သင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အချိန်ပေးမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သင့်ချစ်သူနှင့် သင့်သူငယ်ချင်းတွေအကြား ပြဿနာတွေက တစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
၂။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ကောင်လေးကို ဘာတွေပြောမိသလဲ?
ဘယ်သူမဆို သူတို့ရဲ့ ကောင်လေးကို သူတို့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း ပြောပြဖူးပါလိမ့်မယ်။ သင်က သူတို့အကြောင်း သင့်ကောင်လေးကို ပြောပြတိုင်း သူဘယ်လိုတုံ့ပြန်လေ့ရှိသလဲ? သင်ကရော သူတို့အကြောင်းကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောပြဖူးတာလဲ? အတင်းအဖျင်းပြောသလိုမျိုးလား (ဒါမှမဟုတ်) ယုံကြည်စိတ်ချရသူလိုမျိုးပြောပြဖူးတာလား? ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကောင်လေးက သူတို့ကို သဘောမကျဘူးဆိုတာက သင့်စကားလုံးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားမှာတော့ ပြန်အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် သင့်ကောင်လေးကတော့ သင့်စကားလုံးတွေကို မှတ်မိနေမှာပါ။ ဒီအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကတော့ သင့်ကောင်လေးကို သူကိုယ်တိုင် သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်အကဲဖြတ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘယ်အရာအတွက်မဆို အချိန်တစ်ခုကတော့ အမြဲစောင့်ရပါတယ်။ သင့်ကောင်လေးက သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် စိတ်ရှည်ပါ။ အချိန်ပေးပါ။ လူတွေကို သူတို့ဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်/ ဘယ်လိုလူတွေဆိုတာ သိရဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကောင်လေးနဲ့အတူ စိတ်ရှည်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုသိအောင် ကြိုးစားပါ။
၄။ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ စကားလုံးတွေကို နားထောင်ပါ။ ပြီးမှ…
လူတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီး ချစ်မြတ်နိုးနေဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ ဆိုသလိုပဲ လက်တွဲဖော်ဆိုတာကလည်း အရေးပါပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်သူငယ်ချင်းနှင့် သင့်ကောင်လေးကြားမှာ သမာသမတ်ကျနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ စကားလုံးတွေကို နားထောင်ပါ။ ပြီးမှ ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပါ။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အပွင့်လင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ။ ဒေါသတကြီးအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေနှင့် နားလည်မှုလွဲတာတွေဖြစ်လာရင်တော့ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ပြင်းထန်မှုတွေနည်းပါးပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင့်ကောင်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအကြားမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမကျတာတွေ (သို့) ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့ အတိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်းက ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။